Afrika ma noqon kartaa midowga yurub ee soo socda?
Heshiiska Ganacsiga Xorta ah ee Qaaradda Afrika
Urur cusub oo dhaqaale ayaa dhashay kadib markii 24 wadan ay isu yimaadeen bishii May si ay u sameystaan Heshiiska Ganacsiga Xorta ah ee Qaaradda Afrika (AfCFTA). Ujeeddada ururku wuxuu ahaa in la kordhiyo ganacsiga ka dhexeeya waddamada iyadoo la jebinayo caqabadaha gudban ganacsiga dalalkaas xubnaha ka ah.
Go’aanka Afrika ee ah in la abuuro suuqa xorta ah waxay ka dhigi kartaa midowga yurub ee soo socda . Ganacsiga udhaxeeya wadamada qaarada waxaa lagu qiyaasaa ilaa 20 boqolkiiba. Taasi waxay isbarbar dhigaysaa boqolkiiba 69 Midowga Yurub.
Haddii dhammaan 54da waddan ay ku soo biiraan, isku-darka qarashka iyo awoodda maalgashiga waxaa lagu qiyaasay inay noqon doonto $4 tiriliyan, taasoo ka dhigaysa suuq weyn oo ganacsiyadu ay ku biiri karaan dad gaaraya 1.2 bilyan.
Haddaba Nigeria , oo ka mid ah waddammadii ugu dambeeyay ee saxeexay heshiiska ganacsiga xorta ah.
Labadii bilood ee la soo dhaafay, xuduudaha Nigeria ayaa loo xiray. Dowladda ayaa sheegtay in loo baahan yahay in laga hortago badeecada sharci darrada ah ee la tahriibinayo iyo dambiilayaasha si xor ah ugu goshaya wadanka. Saraakiisha ayaa sidoo kale ku doodaya in alaabada loo weeciyay wadamada deriska ah si looga fogaado bixinta canshuuradka afarta dekedood ee Nigeria.
Laakiin tallaabadaasi waxay dhalisay in dadka Nigeria ay lacag badan ku bixiyaan cunnada, gaar ahaan bariiska.
Peter Attard Montalto, madaxa cilmi baarista suuqyada raashiinka ee Intellidex ee saldhigiisu yahay Koonfur Afrika, wuxuu u sheegay Al Jazeera inay tahay “waddo dheer” illaa inta laga gaadhayo suurtagalnimada dhabta ah ee Aagga Ganacsiga Xorta ah ee Qaaradda Afrika oo si buuxda loo xaqiijin karo.
Waxaa jira qoraal aad iyo aad u badan oo laga hadlay kaas oo kusaabsan heshiiska, isku xirnaanta canshuraha qiima kaladuwan ee badeecooyinka iyo xarumo sahayda keydka ee qaaradda oo dhan. Laakiin runtii khariidad aynu jeexnay ee ah in aan ka howlgalno waa waxaa aynu ku joogno. ruun ahaan tii waay adag tahay,sii fuduud lagu dhameyo ”ayuu Montalto sharraxay.
“Heshiiska qaarada oo buuxa wuxuu qaadan doonaa waqti dheer si loo arko wax macno leh oo miro dhal ah.”